​के हो सिलिका जेल ? यस्ता छन् फाइदा, कहिल्यै नफ्याक्नुहोस् (भिडियोसहित)
​के हो सिलिका जेल ? यस्ता छन् फाइदा, कहिल्यै नफ्याक्नुहोस् (भिडियोसहित)
हामीले बजारबाट नयाँ पर्स, हैंडबैग, जूत्ता किन्दा त्यसमा सिलिका जेलको प्याकेट पाउँछौं । त्यस्तो सिलिकाको प्याकेटलाई हामी बेकार सम्झेर फालिदिन्छौं । तर, यसका धेरै फाइदाहरु छन् ।
सिलिका डाइअक्साइडबाट बन्ने यो सिलिका जेलले हावामा हुने पानीलाई सोस्ने गर्छ । १० ग्रामको सिलिका जेलले ४ ग्राम पानीलाई सोस्न सक्छ ।
यसका अलावा सिलिका जेलका फाइदा धेरै छन् । आउनुहोस् जानौं यसका फाइदा बारेः
१. ब्यागको गन्ध भगाउँछः सिलिका जेलले ब्यागमा भएको दुर्गन्ध भगाउन मद्दत गर्छ । यसले ब्यागमा भएको दुर्गन्ध मात्र नभइ ब्याक्टेरिया मार्ने काम पनि गर्छ । त्यसैले सधै ब्यागमा एक प्याकेट सिलिका जेल राख्ने गर्नुहोस् ।
२. मेकअप ब्यागमा राख्नुहोस्ः कहिले काही मेकअप ब्याग फ्रेस देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा मेकअप ब्याग भित्र एउटा सिलिका जेलको प्याकेट राख्नुहोस् । यसो गर्नाले मेकअप ब्याग त फ्रेस देखिन्छ नै साथमा यसमा भएको चिल्लोपन पनि हट्छ ।
३. फोटो र किताबमा राख्नुहोस्ः कहिलेकाहिं फोटो र किताब धेरै बेरसम्म हेरिरहनाले त्यसमा पहेँलोपन देखा पर्छ । यस्तो अवस्थामा फोटो र किताबमा सिलिका जेलको प्याकेट राख्नाले किताबबाट आउने गन्ध समेत हराउँछ ।
४. चाँदीको चमकका लागिः धेरै समय चाँदीको प्रयोग गर्नाले यसको चमक हराउँदै जान्छ । अनि हामी पोलिश गरेर यसलाई चम्काउँछौं । तर, अब भने हामीले यस्तो झन्झट गरिरहनु पर्दैन । चाँदीलाई चमकदार बनाइ राख्नका लागि सिलिका जेलमा लपेटेर राख्नुहोस्, कहिल्यै कालो हुँदैन ।
५. फूललाई ताजा राख्न मद्दत गर्छः सिलिका जेलले फूललाई ताजा राल्न मद्दत गर्छ । त्यसैले फूलमा एक प्याकेट सिलिका जेल राखिदिनुहोस् ।
६. मोबाइलमा पानी पसेमाः मोबाइलमा पानी पसेमा पनि सिलिका जेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि तपाईँको मोबाइलमा पानी पसेको छ भने एकैछिन सिलिका जेल भएको थुप्रोमा एउटा झोलमा राख्नुस् । यसो गर्नाले तपाईको मोबाइलले तत्कालै काम गर्न थाल्छ ।